जनवरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments कलियुग, डा. राम बहादुर बोहरा, नेपाल
कलियुगमा मानिसले पतनको बाटो अपनाउन थाल्दछन् । आज नेपालमा जति पनि गलत भइरहेको छ सवै कलियुगको प्रभाव सुरु हुदै छ । यहाँ के गलत के सहि भन्ने छैन् । सहिलाई गलत र गलतलाई सहि भन्नेहरूको तादात दैनिक बढ्दै गएको छ । यस्तो हुनुमा धर्म संस्कृति पतन हुनुलाई मान्न सकिन्छ । आज धर्म संस्कृति नमान्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । जुन थालीमा खादैछन्, जुन देशको छत्रछायाँमा वसेका छन्,जुन धर्म संस्कृतिको आडमा वसेका छन् त्यही धर्म संस्कृतिको खिल्ली उडाउदैछन् यो सवै कलियुगको प्रभाव हो ।
कलियुगको शुरूमा धर्म संस्कृति छाडा अवस्थामा हुने छ । यहाँ कसैलाई केहिको स्वाद हुने छैन केवल गलत होस या सहि जसरी भएपनि स्वार्थ पुर्ति गर्ने र आफुमात्र बन्ने भावनाको विकास हुदैछ । आज जे जसरी नेपालमा दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना बढ्दो छ यो सवै पश्चिमी हावाको प्रभाव र कलियुगको प्रारम्भ हो भन्दा खासै फरक पर्ने छैन । कलियुगको शुरुवात नेपालबाट शुरू हुदै दिन प्रतिदिन नाङ्गिदै जानेछ ।
नेतृत्वलाई देशको चिन्ता भन्दा ढुकुटी कसरी खाली गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास तीब्र गतिमा अघि बढि रहनेछ । धर्मक्रमको विश्वास जिरो हुनेछ । हिन्दू धर्मलाई धर्म मान्न कोहि तयार हुने छैनन् तर यहाँ पैसाको पछि जस्तोसुकै धर्म होस भोली नहेरी लाग्ने धेरै हुनेछन् । कलियुगमा मानिस यति घटिया सोचका हुनेछन् कि आफ्नो जन्मदिने माता पितालाई घरबाट निकाल्ने छन् गुरुको अहित गर्नेछन् । घरघरमा लुटपाट गर्ने गिरोह सक्रिय हुनेछन् । कानुनका पालक राजनीतिको खोल ओडेर गलत व्यक्तिको चाकडी गर्न पछि पर्नेछन् ।
शिक्षामा पनि राजनीतिकरण हुनेछ । अरूले गरेको पेसामा समेत हस्तक्षेप हुनेछ । म भन्दा ठूलो कोहि छैन भन्ने घमंडले जन्म लिनेछ । सरकारले उद्योग चलाउन सक्ने छैन । भएका उद्योग सवै समाप्त हुदै जानेछन् । झुठको खेती फल्नेछ । अन्तमा मान्छेले मान्छेको मासु पनि बाँकी राख्ने छैनन् । आज गौमातालाई खाने छन् भने भोली कुकुरलाई खानेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
← ग्यास्ट्रिकको औषधि ज्वानो
होशियार ! कस्ता व्यक्तिले खानुहुँदैन कागती →